Marxaladaha kala Guurku Waa xiliyada ugu Halista badan. | ogaden24
Marxaladaha kala Guurku Waa xiliyada ugu Halista badan.
Ma Guuleysan kartid hadii aadan xuuraansi dhab ah ku sameynin iyo waliba daraasad cilmiyaysan oo la xidhidha waxaad faraha kula jirto, Hal mar oo il duuf siyaasadeed ah ayaana dadaalkaagii boqolka sano dib kuugu celin kara Jidadkii aad kasoo Gudubtay.
Marxalada kala guurka, sidaan horey usoo sheegay waa marka ugu halista badan ee lugu qiimeeyo Ururadda xoriyad doonka sidey kagga gudbaan Isla markana lugu badbaadiyo barnaamij 40 sano soo socday iyo waliba halgan ku dhisnaa kolba iney koox cusub halkeedi ka sii hormariso.
Heshiski “Good Friday agreement ee Jabaha IRA” ka hor intaanan laga sal gaadhin, waxaa jirtay duruuffo adag kuna kaliftay shacabka Irish inney heshiska soo dhawayn umuujiyaan, maadaama dhaawac bulsho iyo dhaawac maskaxeed ka soo gaadhay dagaalka xoriyada loogu raadinayay shacab weynaha Ireland.
Dowlada British waxay malaayin pound ah ku bixisay sidii dhulka shacabka Ireland loogu beerri lahaa shucuub laga keenay gobolada ay ku nool yihin kuwa British ah ee aan ahayn Irish, waxay ku baahisay warshahadaha “Qamrida, Aflaanta Xun Xun, Drugs”.
Waxana loogu talagalay Inn shacabka Irish lagga dillo ruuxda wadaniyada iyo anshaxa wanaagsan si loo Marin habaabiyo mustaqbalka fog kana soo bixi waayaan hanashada iyo ilaalinta masirka dalkooda.
Heshiska “Good Friday agreement IRA +BRITISH” Waxaa ka horeeyay Inn ka badan 15 heshis oo ay labada dhinac Isla meel dhigeen balse wax ka hirgalay ma jiraan, waxaana u sabab ahaa dowlada British oo daacad ka noqonin marnaba xalinta rabitaanka shacabka xoriyad doonka ee dhul weynaha Ireland.
Hadii kuwii aqoonta iyo cilmiga lahaa heerkaassi marayaan oo waliba ilaa maanta ay ku jiraan maxmiyad dhaqaale iyo mid siyaasadeed, maxaad ka fileysaa shacab 500 sano ku soo jiray gumeysiga Isla markana fursad loo siinin xitaa iney maamul xor ah yeeshaan si garaadka iyo aqoonta loo soo dhiso.
ONLF Waxaa laga sugayaa himilo iyo han sare kana duwan meesheynu maanta joogno, ONLF, waxaa looga fadhiyaa qorshe balaadhan kuna dhisan cilmi iyo waayo aragnimo ku saleysan siyaasada aduunka iyo halganki dheeraa ee la soo marray, sidii loogu sameyn lahaa kawaadir iyo ciidan hirgaliya.
ONLF, lagama filayo inney soo saarto bulsho kala daadsan balse ONLF, waxaa laga doonayaa barnaamijka Somali weyn iyo walaaltinimo ku weyn tahay Inn lugu faafiyo dhamaan deegaanada Dalka.
Dhalinyarada iyo kawaadir ONLF, waxaa laga doonayaa inney dusha saartaan adkeynta taarikhda sooyaalka halganka, ilaalinta midnimada shacabka, ilaalinta anshaxa iyo asluubta halganka, ilaalinta dhaqanka iyo suugaanta shacabka, ilaalinta Dhiiga shuhudada iyo agoonta, daryeelka iyo garab istaaga shacabka baahhan.
La dagaalanka qabyaalada iyo goboleysiga ku dhisan nidaamka qabyaalada, la dagaalanka balwada iyo wax walba oo keeni karra burbur bulsho.
Waxan filayaa marka xogta xuuraansiga iyo daraasad la soo afmeerro laga soo saarri doono “Short time and long time strategy after struggle or liberation” Qorshe dhow iyo qorshe mustaqbalka fog kuna saleysan halganka Somalida Ogadenia iyo dagaalka xoriyada loogu jiray.
Marxalada waa marka ugu halista iyo saameynta kulul sidaasi daraaded waxaan dhamaantena inna wadda saaran ilaalinta midnimada iyo wada jirka shacabka. Waxaa kaloo inugu waajib ah garab istaaga wada hadalka ONLF iyo Ethiopia inta guusha laga gaadhi.